တွေးမိတွေးရာ...ရေးမိရေးရာ: သတိရမိသော သီချင်းနှစ်ပုဒ်
ဒီနေ့အဖို့ ဒီသီချင်းလေးကို သတိရနေမိတယ်။
စိုင်းခမ်းလိတ် ရေးပြီး စိုင်းထီးဆိုင် သီဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းလေးပါ။
ဟိုးငယ်ငယ်ကတည်းက ကြားဖူးပြီး လိုက်ဆိုခဲ့ ညည်းခဲ့ဖူးတဲ့ သီချင်းကလေးပေါ့။
နားထောင်ခါစ ငယ်ငယ်ကတော့ ပျောက်သွားတဲ့ စက်ဘီးကလေးတစီးကို စွဲလမ်းစွာ စပ်ဆိုရေးဖွဲ့ ထားတဲ့ သီချင်းလေးလို့ပဲ သာမန်ကာလျှံကာ တွေးခဲ့မိတယ်။
ဒါပေမဲ့ … သူငယ်ချင်း တယောက်ပြောပြလို့ ဒီသီချင်းရဲ့ လျှို့ဝှက်ချက် ကို သိခဲ့ရတယ်။ တချို့လည်း သိပြီးသား ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ ကျမလည်း တဆင့်သိရတဲ့အတွက် ဟုတ်မဟုတ်ဆိုတာတော့ သေချာပေါက် မပြောတတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘာသာ ကိုယ် ဟုတ်မဟုတ် တွေးကြည့်ကြရုံပါပဲ။ ဒီသီချင်းရဲ့ ရာဇ၀င်ကို သေချာသိသူများ ရှိရင်လည်း ပြောပြစေချင်ပါတယ်။
ပြောပြတဲ့သူငယ်ချင်းက အိုကေသုည ၁၂၂ အယ်လ် (OK0122L) ဆိုတဲ့ နံပါတ်ကို စာရွက်မှာ ချရေးပြတယ်။
နောက်ဆုံးစာလုံး L အရှေ့က OK0 နဲ့ ပေါင်းပြတယ်။ LOOK တဲ့ … ။ ကျန်တဲ့ ဂဏန်း 122 ကတော့ ၁၂ ရက် ၂ လ၊ (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ရက်ပေါ့)။ LOOK 122-ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်ကို ကြည့်ပါ … လို့ ဆိုလိုတာပါ။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုနေ့ပဲ၊ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့တကွ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ပင်လုံစာချုပ် လက်မှတ်ရေးထိုး ကြတဲ့ နေ့ပဲ။ ဒါကို ဘာလို့ ပြန်ကြည့်ခိုင်းတာလဲ …. ။
ပင်လုံညီလာခံမှာ ဘာတွေ ဆွေးနွေးခဲ့ကြသလဲ … ပင်လုံစာချုပ်ကို ဘယ်လိုရေးဆွဲ ချုပ်ဆို ခဲ့ကြသလဲ …။
ဒီသီချင်းကို သတိတရ ညည်းမိရင်း … ပင်လုံစာချုပ်အကြောင်း ဖတ်ရင်းနဲ့ ဟိုတလောက ဖတ်လို့ပြီးသွားတဲ့ ဗိုလ်သိမ်းဆွေရေး “လွတ်လပ်ရေးတိုက်ပွဲ” စာအုပ်ကို ပြန်လှန်လှော ဖတ်ကြည့်မိသေးတယ်။
အဲဒီစာအုပ်ထဲက စာတချို့ကို ကောက်နုတ် ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ်။
ပင်လုံညီလာခံကို ၁၉၄၇ဖေဖော်ဝါရီ (၆)ရက်နေ့မှာ စတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ (၇) ရက်နေ့မှာ ရှမ်း၊ ကချင် (ဂျင်းဖော)၊ ချင်း အမျိုးသား ကိုယ်စားလှယ်တွေက အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါတယ်။
၁။ မြန်မာများနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် ရှမ်း၊ ကချင်နှင့် ချင်းအမျိုးသားတို့၏ လွတ်လပ်ရေးသည် ပိုမိုလျင်မြန်စွာ ရရှိလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း။
၂။ ဒီမိုကရေစီ နည်းစနစ်အရ မြန်မာလူမျိုးတို့ ရရှိခံစားနေသည့် အဆင့်အတန်း အခွင့်အရေးများနှင့် အကျိုးစီးပွား များကဲ့သို့ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့လည်း ရရှိခံစားရန် လိုလားကြောင်း။
၃။ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်း အမှုဆောင် ၀န်ကြီးများသည် မိမိတို့နှင့် သက်ဆိုင်ရာ ပြည်တွင်းရေး ကိစ္စ အ၀၀တို့တွင် မိမိတို့သာလျှင် တာဝန်ခံ၍ အများနှင့် သက်ဆိုင်ရာ ကိစ္စများ (ကာကွယ်ရေး၊ နိုင်ငံခြား ဆက်သွယ်ရေး၊ မီးရထား၊ ဆိပ်ကမ်းခွန် စသည်) တို့ကို မြန်မာများနှင့် ပူးပေါင်း တာဝန်ခံလိုကြောင်း … ။
အဲဒီ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အစည်းအဝေး ဥက္ကဋ္ဌ တောင်ပိုင်စော်ဘွားကြီး စောခွန်ပန်းစိန်က အသံလွှင့်ရုံကို သံကြိုးရိုက်ပြီး ကြေငြာစေတဲ့အတွက် အဲဒီညက အသံလွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ (၈) ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ အဖွဲ့ဟာ ပင်လုံကို ရောက်ရှိလာကြပါတယ်။
“ပင်လုံအစည်းအဝေးသို့ အကြောင်းနှစ်မျိုးကြောင့် လာခဲ့ရကြောင်း၊ ပထမမှာ မြန်မာပြည်ရှိ လူမျိုးများ ညီညွတ်ရေး အတွက် ဖြစ်၍၊ အခြားအကြောင်းမှာ လန်ဒန်ဆွေးနွေးပွဲ၌ တောင်တန်းဒေသနှင့် ပတ်သက်၍ မည်သို့ ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်ကို ပြောဆို ရှင်းလင်းပြရန် ဖြစ်ကြောင်း ….
…. … … .. .. … ..
မြန်မာများသည် ဗြိတိသျှ၏ကျွန် မဖြစ်စေလိုကြောင်း။ ထိုနည်းတူစွာ တောင်တန်းလူမျိုး များသည် ဗြိတိသျှ၏ ကျွန်များအဖြစ် မရောက်စေလိုကြောင်း၊ ထိုပြင် တောင်တန်းလူမျိုးများသည် မြန်မာ့ကျွန် မဖြစ်စေလိုကြောင်း။
တောင်တန်းနယ် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးမှာ ကောင်စီ၏ လက်ထဲ ရှိနေလိမ့်မည် ဖြစ်ကြောင်း။ ထိုကောင်စီ အဖွဲ့ထဲ၌ တောင်တန်းနယ်မှ ကိုယ်စားလှယ် တယောက် ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ရာ ယင်း၏ လက်ထဲမှာကား ထိုအုပ်ချုပ်ရေး ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း …. ။
စသည်ဖြင့် ဗိုလ်ချုပ်ဟာ တောင်တန်း ကိုယ်စားလှယ်များနဲ့ သုံးရက်ခန့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဆွေးနွေးတင်ပြ ခဲ့ပါတယ်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၁ ရက် ညမှာတော့ မြန်မာပြည်နဲ့ တောင်တန်းနယ်များ ပူးပေါင်းရေး အခြေခံသဘောတူညီမှု အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် ပင်လုံညစာ စားပွဲကြီး တည်ခင်း ကျွေးမွေးကြပါတယ်။ အဲဒီညစာစားပွဲမှာ ဗိုလ်ချုပ်က ခုလို မိန့်ခွန်း ပြောခဲ့တယ်။
“တတိုင်းပြည်လုံး ကြီးပွားစေချင်ရင် လူအား၊ ငွေအား ပစ္စည်းအား နဲ့ စုပေါင်းပြီး အင်တိုက် အားတိုက် လုပ်နိုင်မှ အကျိုးခံစားခွင့်ရှိမှာပဲ။ ဗမာကတမျိုး၊ ကရင်က တဖုံ၊ ရှမ်း၊ ကချင်၊ ချင်းတို့ကတခြား အကွဲကွဲအပြားပြား လုပ်နေကြရင် အကျိုးရှိမှာ မဟုတ်ဘူး။ စုပေါင်းလုပ်ကြမှသာ အကျိုးရှိနိုင်မယ်၊ လုပ်ကြည့်မှလဲ အကျိုးရှိ ကြောင်း သိနိုင်တယ်”
နောက်တနေ့ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက် မနက် ၁၀ နာရီမှာတော့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ တောင်တန်း ကိုယ်စားလှယ် ၂၁ ဦးတို့ဟာ တိုင်းရင်းသား ညီညွတ်ရေး အဆောက်အဦကို တည်ဆောက်မယ့် ပင်လုံစာချုပ်ကြီးကို တညီတညွတ်တည်း လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါတယ်။
ပင်လုံစာချုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး အကောင်အထည် ဖော်နိုင် မဖော်နိုင် ဆိုတာကတော့ အများသိကြတဲ့ အတိုင်းပါပဲ။
ဒါကြောင့်လည်း စိုင်းခမ်းလိတ်က သီချင်းထဲမှာ ရေးခဲ့တာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသီချင်းအပြင် ကျမ နောက်ထပ် သတိထားမိတဲ့ သီချင်းကတော့ “ကွတ်ခိုင်ကဇာတ်လမ်းတပုဒ်” ဆိုတဲ့ သီချင်းကလေးပါပဲ။
ရိုးရိုး အချစ် ဇာတ်လမ်းလေး တပုဒ်ကို ရေးဖွဲ့ထားတဲ့ သီချင်းလို့ ထင်ရပေမဲ့ သေချာနားထောင်ရင် အဓိပ္ပါယ် ရှိပါတယ်။
ဘာရယ်တော့ မဟုတ်ပါဘူး … သီချင်း နှစ်ပုဒ်ကို နားထောင်ရင်းနဲ့ တွေးမိတာလေးတွေ ရေးလိုက်တာပါ။
Posted by မေဓာဝီ at 8:57 AM
Labels: သမိုင်းဝင် နေ့ရက်များ, သီချင်း
That2songs are really good indeed.
I can recall my memories while I was as hostel :)
But I didn't know that number was use to mean that way.
2/11/2007 12:53 PM
မမေဓာပြောမှ OK0122L ကို သိတော့တယ်။ ကျေးဇူး ကျေးဇူး
2/12/2007 1:39 AM
During these days, the girl in my apartment listening the songs of "Ko Thee" including these two songs. I was told the meaning behind of these songs by my closed "Ma" by mail last year and we together sang these songs together by gtalk. All "Ko Thee"' songs makes me miss all the past, specially this song makes me miss Mandalay.
Thanks Ma May!!! But you makes me more miss to my home town by your today post!!!
Any way, thanks ..
2/12/2007 7:31 AM
အဲဒီ သီချင်းက ဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ ရေးခဲ့တယ်ဆိုတာ အခုမှ သိရတော့တယ်။ အထောက်အထား တခုခုပါရင်တော့ ပိုပြည့်စုံမယ်ထင်တယ်..အမ။ သီချင်းစာသားတွေကလဲ ပုံစံမျိုးစုံခံစားလို့ရနေတာ ဆိုတော့။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာလဲ ဗဟုသုတ တခုပါပဲ။
2/14/2007 2:20 AM
Sayar Sai Khan Laik is my favourite writer. He has written many meaningful songs..like "Mandalay yaut shan ta yaut", "Taung paw myay eiachar ta phat", "Than Lwin Chaung Char" etc